वेब २.० जानकारी ओभरलोड Martech Zone
वेब २.० जानकारी ओभरलोड
बुधबार, नोभेम्बर 18, 2009 मंगलवार, मे 6, 2014 एडम सानो
सूचना, अनुप्रयोगहरू र नयाँ समाधानहरू आउँदैछन् तपाईंमाथि आउँदैछ? मलाई थाहा छ म हुँ! मलाई मुर्ख कल गर्नुहोस्, तर केहि आईटमहरू जुन मँ भन्छु आज धेरैलाई पुरानो समाचार हुन सक्छ, तर यति धेरै जानकारीको साथ, कसले वास्तवमै राख्न सक्दछ। जब सम्म तपाईं हुनुहुन्छ Douglas Karr or काइल लेसी - जे भए पनि, म विश्वस्त छु तिनीहरू निदाउँदैनन्!
सबै विवरणहरू जाँचमा राख्न मैले केही नयाँ संगठनात्मक उपकरणहरू प्रयोग गर्न सुरु गरें। यहाँ केहि थोरै छन् जुन मैले सहयोगी पाएँ:
स्वादिष्ट: ठीक छ, ठीक छ, मलाई थाहा छ तपाई मध्ये धेरैले यस बारे पढ्नु पहिले नै स्वादिष्टको बारेमा थाहा हुन सक्छ। मैले यसबारे पनि थाहा पाइसकेको छु, तर सामाजिक साझेदारीको विकास नभएसम्म यसको प्रभाव यत्तिको कहिले भएन। मलाई मन पर्छ कि म बुकमार्क गर्न सक्दछु र टाग गर्न सक्दछु र जे भए पनि मँ जुन कम्प्युटरमा छु, जहाँ म छु, मँ त्यहाँ सधैं मेरो मनपर्ने गर्दछु। मैले याद गर्न चाहेको ती सबै लि find्कहरू फेला पार्न द्रुत र सजिलो ठाउँको उल्लेख नगरी। भर्खरको ब्लग पोष्ट जस्तै वेबिनार आमन्त्रित गर्दछ, वा लेख पनि।
पिकनिक: फेरि, बजारहरू रचनात्मक व्यक्ति हुन् र हामी चुटकीमा डिजाइन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। म आवश्यक पर्दा डिजाईन गर्न सक्दछु, तर जब मलाई केहि छिटो, सरल र सजिलो चाहिन्छ ... म पिकनिक छनौट गर्दछु! विशेष गरी ती प्रोजेक्टहरूका लागि तपाई मस्तिष्क शक्ति बिना नै अलिक मसला लिन चाहानुहुन्छ। तिनीहरूको ईन्टरफेस प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ र फेरि कुनै पनि वेब-आधारित अनुप्रयोग जस्तै… .तपाईँ तपाइँको चित्रहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
Feedburner: अहिले म पक्का छु तपाईंले सोचिरहनु भएको छ, उनी कुन चट्टानमा छन्? यति धेरै हैन… .अम्बर, म एक व्यस्त मार्केटर हुँ यो सबै AZ ले जाल गर्दै! मलाई द्रुत चाहिन्छ, मलाई सरल चाहिन्छ, र चुटकीमा हुँदा म फर्केर जानु पर्छ। जबकि मँ आरएसएस क्षमताहरु को लागी फिडबर्नर लाई जहिले पनि परिचित छ र माया गर्दछु, तर मैले भर्खर तपाईको ब्लगमा इ-मेल फारम इम्बेड गर्न पनि सिकेकी छु। र त्यसपछि मेट्रिक्स, धेरै राम्रो छ कि म यी सबै उपकरणहरू मेरो गूगल प्लेटफर्ममा हरेक दिन हुँदछ।
Google Apps: म गुगल भक्तको जस्तो आवाज लिन चाहन्न किनकि अन्य धेरै मार्केटरहरू जत्तिकै म तिनीहरूको खोजीमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्दैछु भनेर म सधैं विचलित हुन्छु। यद्यपि डेलिभ्रामा हामी सबै गुगल अनुप्रयोगबाट सबै चीजको लागि काम गर्छौं र मलाई निश्चित छ कि कुनै पनि डेस्कटप सफ्टवेयरको तुलनामा लागत बचत ठूलो छ, म मेल, क्यालेन्डर, साइटहरू (जुन हामी प्रेम गर्दछौं) बाट बिभिन्न अनुप्रयोगहरूबाट प्रभावित छु। कागजातहरू, तपाईले यसलाई नाम दिनुहुन्छ। अब मलाई थाहा छ यो उत्तम छैन, तर पहुँच र तथ्य यो हो कि क्र्याश हुँदैन एक दिन मलाई बेचेको छ।
स्मार्टशीट: यो सम्भवतः एक मात्र अनुप्रयोग हो जुन तपाईं धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। म स्मार्टसिट मन पराउँछु किनकी म स्थिर सूची बनाउने हुँ। म कसरी दैनिक कुरा गर्ने हजारौ चीजहरूको ट्र्याक राख्न सक्छु? कुनै पनि घटनामा, अनुप्रयोगले मलाई मद्दतको मल्टिपल गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ म तिनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा रँक गर्न सक्छु, अन्यसँग साझेदारी गर्न, कहिँ सम्पादन गर्न, प्रिन्ट गर्न वा जहाँ म भए पनि पहुँच गर्न सक्दछु।
त्यहाँ तपाईंसँग यो, पाँच सरल उपकरणहरू छन् जसले मलाई सूचना ओभरलोडको शिकार हुनबाट बचाउँछ। यदि तपाईं एक समय भोक मार्केटर हुनुहुन्छ वा केवल समय भोकमरी हुनुहुन्छ भने, यी उपकरणहरूमध्ये केही तपाईंको चालको झोलामा समावेश गर्नुहोस् र तपाईं लोडलाई सजिलैसँग प्रबन्ध गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि होईन भने, नयाँ हाइपरलिंक्सलाई विचार गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ र माया गर्नुहुन्छ।
टैग: सामाजिक मिडिया मार्केटिङWordPress
फ्लैट हेड गिलहरी र कामिकाजेस
नोभेम्बर,, २०१ at 19::2009 बिहान
म डिगोलाई स्वादिष्ट बनाउन मन पराउँछु, जबकि Google Sidewiki ले यसको एनोटेशन क्षमताहरूको लागि मेरो ध्यान खिच्न सुरू गरिरहेको छ जुन डिगोको जस्तो मिल्दो छ (शक्तिशाली जस्तो सोचेको छैन)।
राम्रो छोटो सूची Carissa। यसले छोटकरीमा बिभिन्न प्लेटफार्महरूमा देखाउँदछ जुन हामी सबै मार्केटरहरूले हाम्रो सामानहरू पूरा गर्नु पर्छ। म स्मार्टशीट जाँच गर्दैछु। ड्रथोमासो जस्तै, म पनि डिगोलाई स्वादिष्ट बनाउन मन पराउँछु किनकि तपाईं पृष्ठहरूमा नोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ट्यागहरू खराब छैनन्, तर डिआईगोसँग म पृष्ठमा दुवै ट्यागहरू र "स्टिकी" प्रयोग गर्न सक्दछ सम्पूर्ण सुरक्षित सामग्रीको एक सेक्सनमा फोकस गर्न। फेरि भेटौला! Aपउल
वेब डिजाइन कम्पनी
यी उपकरणहरू वास्तवमै सहयोगी छन्। म आशा गर्छु कि सबैजना निश्चित रूपमा यो जानकारीमूलक पोष्टबाट प्राप्त गर्नेछन् र साइटलाई प्रभावकारी बनाउन यी बहुमूल्य उपकरणहरूको उपयोग गर्दछन्।
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::12। बिहान